Amanyathelo ayi-8 okwakha amaphepha okufika afanelekileyo | Martech Zone
Amanyathelo ama-8 okuYila amaPhepha okuFikelela ngokuSebenzayo
NgeCawa, uDisemba 6, 2020 NgeCawa, uDisemba 6, 2020 UStefanie Siclot
The iphepha lokufika sesinye seziseko eziza kunceda abathengi bakho bahambe kuhambo lomthengi wabo. Kodwa yintoni kanye kanye? Kwaye okubaluleke ngakumbi, inokukhulisa njani ngokukodwa ishishini lakho?
Ukushwankathela, i iphepha lokufika elisebenzayo yenzelwe ukwenza umthengi onokubakho athathe inyathelo. Oku kunokuba kukubhalisela kuluhlu lwe-imeyile, ukubhalisela umsitho ozayo, okanye ukuthenga imveliso okanye inkonzo. Ngelixa injongo yokuqala isenokwahluka, iziphumo ziyafana. Oko kukuguqula umthengi abe ngumthengi ohlawulelayo.
Ngoku ekubeni sichazile ukuba leliphi iphepha lokufika, masithethe ngezinto ezenza ukuba ibe Isisombululo sokuyila sewebhu. Nanga amanyathelo onokuwalandela ukwenza iphepha lakho lokufika lingenakuphikiswa.
Inyathelo 1: Chaza abajolise kuwe
Ngaphambi kokuba uqale ukubhala, kuya kufuneka unombono ocacileyo wokuba ngoobani abajolise kuwe. Yenza umthengi ngokubonelela ngeempawu ezithile ezinje ngeminyaka, isini, isidanga semfundo, umsebenzi, umvuzo wenyanga, kunye nokunye.
Ngokwenza oku, uya kuba nakho ukulungelelanisa umyalezo wakho ngokucacileyo, ukulungisa indawo ethile yeentlungu, kunye nokucacisa isibonelelo semveliso yakho. Emva kokuchaza abaphulaphuli bakho, qhubela phambili kwisinyathelo esilandelayo.
Inyathelo 2: Sebenzisa umthetho wokuphindaphinda
Izazinzulu ngengqondo kwezentlalo zibhekisa kule meko njengenzondelelo enzulu yokubuyisela ububele nanini na umntu esenza into entle kuwe. Iisampulu zasimahla, ingxelo eneenkcukacha, okanye uluhlu lokutshekisha olulula zezinye zezipho ezenziwa ziinkampani ukusebenzisa eli qhinga ngokufanelekileyo.
Ke masithi uzama fumana imeyile yomthengi okanye babhalise kuluhlu lweposi. Ungabathembisa ngesindululo sexabiso eliphezulu ukubakhuthaza ukuba bathathe inyathelo. Kwaye ukuba unika into exabisekileyo, baya kuthatha ukuba oko ukubonelela kungcono nangakumbi.
Inyathelo lesi-3: Bhala iNqaku eliPhezulu eliPhezulu kunye nesihloko esisezantsi
Isihloko sisona sikhonkco sakho siphambili sokubuyisela umthengi kuyo; ujiko-ntloko olubamba ingqalelo yabo. Ifuna ukufumana inqaku lakho ngokucacileyo nangokufutshane. Okwangoku, umxholo ongezantsi ubonelela ngeenkcukacha ezithe kratya malunga nemveliso okanye inkonzo ukwenza ukuba umthengi ahlale kwaye azi ngakumbi.
Xa ubhala zombini, soloko uguqula into yakho ibe yinzuzo. Umzekelo, ukuba uthengisa i-smartphone enobomi obude bebhetri, sukuthetha nge-mAh yayo (milliampere-iyure). Endaweni yoko yithi "Binge-bukela umboniso wakho owuthandayo weNetflix ngexesha elinye." Ngale ndlela, uxelela indlela imveliso enokubuchaphazela ngayo ubomi babaphulaphuli bakho kunye nokusombulula inqaku elithile leentlungu ebomini babo.
Inyathelo 4: Nika isiQinisekiso seNtlalo
Ubungqina boluntu yinto ebaluleke kakhulu kwiphepha lakho lokufika njengoko libonisa umthengi onokubakho ukuba abantu sele bexhamla kwimveliso yakho.
Ama-88% abathengi bathemba uphononongo lomsebenzisi ngokungathi yingcebiso yakhe.
Zama ke ukufumana ubungqina kubathengi abonwabileyo kwaye ubukele inqanaba lokuguqula kwakho linyuka. Emva kwayo yonke loo nto, abantu bathanda ukulandela umhlambi. Kwaye xa umhlambi wanelisekile, abathengi abanokubakho baya kuzama ukungena kwinyathelo lokuba yinxalenye yamava.
Inyathelo 5: Idilesi yeVistors's Points Pain kunye nendlela oziPhelisa ngayo
Masithi uthengisa inkqubo yasekhaya yabaqalayo. Inqaku lakho lentlungu apha kukuba umthengi wakho unokuba nemicimbi yokuzithemba evela kubunzima babo. Mhlawumbi banengxaki yokungena kwiingubo zabo kwaye oku kuchaphazele ubomi babo boluntu.
Ngoku, umsebenzi wakho kukwenza iphepha lokufika eliqaqambisa le ngongoma yentlungu emva koko uyisuse usebenzisa inkonzo yakho. Umxholo wakho ungabonakala ngathi:
Fumana umzobo othuthuzelayo kwikhaya lakho. Or Lungisa loo bod yolwandle ulungele ihlobo.
Ungayilandela ngolu hlobo lulandelayo:
Le nkqubo yasekhaya yenzelwe ukukunciphisa ngaphandle kokuxhomekeka kwizixhobo, amayeza, okanye izixhobo eziphezulu. Yonke into oyifunayo lixesha, inkuthazo kunye nokugaya okungaguquguqukiyo.
Inyathelo 6: AbaTyeleli ngqo kwiFowuni yokuSebenza
Emva kokubandakanya ezi zinto sele zichaziwe, lixesha lokuba wenze iFowuni yakho ukuba isebenze. Ifuna ukuba mfutshane, ibonakale kwaye isebenzise ulwimi olucengayo. Masinamathele kwinkqubo yokufunda ekhaya njengomzekelo.
Endaweni yokulungiselela uhlobo oluqhelekileyo Ngenisa iqhosha lokufumana i-imeyile, ungayicoca ngokuthetha Joyina abasebenzi or Qalisa ukutsha ngaloo mafutha namhlanje. Kuya kufuneka usebenzise iigrafiki zokurhola ukukhokelela umthengi ngokuthe ngqo kwi-call-to-action (CTA). Ngaphezu koko, sebenzisa imibala eyahlukileyo ukunceda yenza iqhosha ligqame.
Inyathelo 7: Vavanya, Vavanya, Vavanya… Yonke into
Ewe kunjalo, kusafuneka wenze uvavanyo lwe-A / B ukunyusa amaxabiso akho okuguqula. Vavanya yonke into… ukusuka kwimiba yoyilo, imifanekiso, iifonti, iintloko, izihlokwana, imifanekiso, amaqhosha, ukufowunela iintshukumo… yonke into. Ukuhambisa isicwangciso sephepha lokufika akusokuze sigqibe ngaphandle kwesicwangciso sovavanyo.
Ukuvavanya amaphepha amaninzi kwiindawo ezahlukeneyo zokuthenga kunye nezixhobo kwakhona sisicwangciso esihle. Ukuba sisicwangciso se-B2B, umzekelo, unganqwenela ukuba nephepha lokufika elilelakho elenzelwe ishishini ngalinye olisebenzelayo. Okanye ukuba liphepha lokufika eligxile kubathengi, unganqwenela ukwenza umxholo kunye nemifanekiso ngokobudala, isini, indawo.
Inyathelo 8: Sebenzisa iqonga lephepha lokufika
Ukuyila iphepha elifanelekileyo lokufika akudingi mzamo okanye ixesha xa unesisombululo esifanelekileyo sephepha lokufika. Izisombululo zephepha lokufika zikwenza ukuba wakhe amaphepha amahle okufika kunye nesakhono sokukhuphela, ukuvavanya, ukudibanisa, kunye nokuhlela ngaphandle komzamo.
Phuma UkukhwelaIsisombululo sephepha lokufika esilula esiza kukuxhobisa ukuba usebenzise iingcebiso ezikule nqaku!
Qalisa ukulingwa okanye Fumana iDemo ye-Instapage
Ukusuka kubaThengi abaNokubakho ukuya kubalandeli beRaving
Iphepha lokufika elinyanzelekileyo linokunyusa izinga lokuguqulwa kwakho kwaye likuncede ukukhulisa ishishini lakho ngokukhawuleza. Ngokulandela la manyathelo akhankanywe apha ngasentla, uya kwandisa ukusebenza kwephepha lakho lokufika ukusuka ekuhambeni nasekunciphiseni ixesha lokulungisa. Khumbula nje ukuba uhlala ubeka ixabiso ngaphezulu kwayo yonke enye into kwaye uya kuguqula abathengi abanokubakho babe ngabalandeli abahlaselayo ngaphandle kwexesha.
Ukwazisa: Martech Zone lilungu le Ukukhwela!
tags: iphepha lokufika elisebenzayoUkukhwelaiphepha lokufikauyilo lwephepha lokufikaiintloko zephepha lokufikaamanyathelo ephepha lokufikaiingcebiso zekhasi lokufikaImixholo engezantsiUbungqina
UStefanie Siclot yinxalenye yeqela le-SEO e Rocket yokukhula, iarhente yentengiso yedijithali eseLos Angeles. Unoxanduva lokunyusa umgangatho kunye nobungakanani betrafikhi yewebhusayithi oko kuthetha ukuba kumnandi kuye.